मीठो दुध, तीतो यथार्थ
दुध बालबृद्ध, बिरामी, स्वस्थ सबैका लागि अमृत मानिन्छ । यसकारण सरकार आफैले दुग्ध विकास संस्थान चलाएको छ । यो संस्थानले कृषकबाट दुध संकलन गरेर देशव्यापी रुपमा वितरण व्यवस्था मिलाएको पनि छ । तर यो संस्थान सधैं भ्रष्टाचारको केन्द्र रहनु दु:खद हो ।
यसैवीच चितवनदेखि झापासम्मका दुध किसानहरुले सडकमा दुधको खोलो बगाइदिए । कारण सरकारले कृषकलाई ऋण दिने, गाई भैंसी पालनका लागि उत्साहित गर्ने, किसानले पनि गाई भैंसी पालनमात्र होइन, तिनका लागि चाहिने घाँसखेतीदेखि दाना उद्योगसम्म चलाएर आफ्नो किसानी पेशालाई अघि बढाइरहेका छन् । ऋणधन तिर्ने, चारपैसा कमाएर जहानबच्चा पालनपोषण गर्ने कृषकको सपना यसकारण शोम शर्माको सपनाजस्तो भइरहेको छ कि सरकारले किसानबाट दुध नकिन्ने, किने पनि समयमा मूल्य नदिने र जसरी पनि किसानलाई मर्कामा पार्ने नीति लिनाले किसानहरु साह्रै शोषणमा पर्दै गएका छन् ।
यतिबेला सरकारले दुध उत्पादकहरुको नियमन र निगरानी बढाएको छ । ४२ दुग्ध उत्पादन उद्योगका दुधमा रासायनिक पदार्थदेखि सोडासम्मको मिसावट भएको, दुषित पानीसमेत प्रयोग गरेको लगायतका रिपोर्ट दियो । यतिसम्म कि सरकारी दुग्ध विकास संस्थानका उत्पादनमा समेत खोट भेटियो । र, यी दुग्ध उत्पादकहरुलाई सुधारमा ल्याउन अझ कडा नियमन र निगरानी गर्ने, तिनलाई दण्डित गरेर सेतो दुधको व्यापारमा कालोबजारी, कालोपन ल्याउन रोक्नुको बदला सरकारले अझै छुट दिएको छ र नेपाली उत्पादकहरुबारे तिनीहरु कामै नलाग्ने, मानवस्वास्थ्यसँग गम्भीर छलकपट, खेलबाड गरेको प्रचारबाजी भइरहेको छ । यस्तो प्रचारवादीमा भारतीय कम्पनीसमेत लागेको खुलासा हुनपुगेको छ । आखिर किन ?
समृद्धि र सुशासनको एजेण्डा बोकेर बनेको सरकारले भएका उद्योगलाई समाप्त पार्ने खालको क्रियाकलाप किन गरिरहेको छ ? किन हुन दिइरहेको छ ? थप उद्योग खोल्ने र रोजगारी सिर्जना गर्नेतिरभन्दा भएका उद्योगको सफाया गर्नतिर लाग्नु भनेको अराष्ट्रिय काम हो । कृषि मन्त्रालयका केही उच्चाधिकारीहरु नै भन्छन्– नेपालको दुग्ध व्यवसायमा भारतको अमूल कम्पनीको प्रवेश गराउने दुग्ध किसानलाई मर्कामा पार्ने र दुग्ध उद्योगहरुका कमी कमजोरी सुधार्नतिर भन्दा तिनीहरुको खोइरो खन्नतिर लागेकालाई सरकारले मौन बसेर सहयोग पुर्‍याइरहेको छ । त्यसै पनि दुधको आपूर्ति कम भएर पाउडर दुधको समेत खपत भइरहेको छ । उत्पादित दुध सडकमा पोखेर किसानहरु आफ्नो आवाज यसरी सरकारसम्म पुर्‍याइरहेका छन् । सरकारका केही कमिशनखोर तत्वहरु भने भारतो कम्पनी नेपालमा भित्र्याएर नेपालका दुध उत्पादकहरुलाई असफल पार्नतिर लाग्नु दुर्भाग्यको कुरा हो ।
दुषित दुधलाई कसरी स्वस्थकर मापदण्डमा ल्याउने र नेपालको दुध उत्पादकदेखि वितरकसम्मको सुधार गर्न सकिन्छ, सरकार ध्यान देउ ।